Ear Clamp |TheOne
Zvisungo zvenzeve zvinoshandiswa kubatanidza hose kune pombi kana kupinza.Vane bhande resimbi rinobuda kunze senzeve, ndosaka rava zita razvo.Mativi enzeve akabatwa pamwechete kuti asimbise mhete yakatenderedza hose kuti ibate panzvimbo.
Yakagadzirwa nesimbi isina tsvina, aya mabhanhire anoshingirira mukuora uye haaite ngura.Yavo yakakosha cochlear dhizaini inopa yakasimba kupisa kwekuwedzera muripo wekuita iyo inobatsira kuchengetedza hose munzvimbo yakachengeteka.
Aya masimbi ane nzeve imwe chete uye anovhara hukuru husere hunozivikanwa, kusanganisira 6-7mm, 7-8.7mm, 8.8-10.5mm, 10.3-12.8mm, 12.8-15.3mm, 15.3-18.5mm, 17.8-21.0mm, 20.3-2mm, 20.3-2. mm.Aya machira enzeve anoshandiswa zvakanyanya kune hose nemapombi epurasitiki, uye anoshanda zvakanyanya kana zvasvika kune hose dzechinwiwa muchina, mabhoti, midhudhudhu, mota, uye kunyangwe indasitiri.
Ichi chibatiso chechokwadi Chisina nhanho chakagadzirwa nesimbi isina tsvina chinochidzivirira kubva ku ngura.Iyo ine lightweight 360 ° nhanho dhizaini zvinoreva kuti hapana nhanho kana maburi mukati medenderedzwa remukati.Izvi zvinobvumira kusungirirwa kwechisimbiso kusungirirwa nebhendi rayo nhete.Iyo ine zvakare yakanyatso kuumbwa mitsetse yemupendero inoderedza njodzi yekukuvadzwa kune chikamu chepoipi iri kusungwa.
Corrosion-Resistant, aya akanyanya kunaka nzeve imwe isina nhanho hose masimbi anovakwa kubva ku304 Stainless simbi uye haaite ngura saka akanakira kushandiswa kwenguva refu.Iyo yakawedzera clamp force inovabvumira kuti ishandiswe kusimbisa ruzhinji rwetypes yezvisungo sezvo pincers inogona kuwedzera iyo clamping simba.Aya mabhanhire anoshanda zvikuru pakugadzirisa mapombi uye masisitimu epombi.
Haasi chete mabhanhire aya anogadzirwa kubva ku304 simbi isina tsvina, asi zvakare anopokana ne ngura uye ngura.Ivo vanokwanisa kusunga nekukasira kubva pakugadzira kwavo cochlear iyo inofambisa muripo wekuwedzera kwemafuta.Iwo ari nyore kushandisa sezvo aine magineti kugona kuvabata munzvimbo.
Nguva yekutumira: Zvita-22-2021